Ividiyo: Umhlahlandlela kaMarketer wePinterest | Martech Zone
Ividiyo: Umhlahlandlela kaMarketer wePinterest
ULwesine, May 10, 2012 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 Douglas Karr
Ngiyayithanda i-infographics, ngakho-ke lapho ngibona ividiyo enhle kakhulu ye-infographic ngithola ukukhishwa ngokwengeziwe. Pinterest iyaqhubeka nokukhula esikhaleni sokwabelana nomphakathi sibonga ubuhle bayo obubonwayo, ukwabelana okulula nokusetshenziswa kalula. Sigcina i-a I-Marketing Infographics ukugibela lapho okuthandwa kakhulu futhi kuthola ithrafikhi eningi ibuyele kusayithi lethu. Ngezinye izikhathi, uPinterest ungomunye wababhekisi bethu abanamandla kakhulu bethrafikhi. Izinkampani ziqaphele futhi zisebenzisa iPinterest ukukhulisa ukufinyelela kwazo.
Kudos ukuze Ukukhangisa kwe-MDG kuvidiyo emnandi ye-infographic.
Tags: ziqondiseumhlahlandlela ku-pinterestPinterestumhlahlandlela we-pinterestividiyo ye-pinterest